Ladies and Gentleman, Amahora amane kuze 2018. Okumisiwe, Ukunciphisa ama-T amahora amane nokubala kuze kube yi-2018 (okukhiqizwayo) - Ukubala kwe-NYE kwe-Djs, Vjs, i-nightclub 2019
SKU: I-DJ DROP 100 - # 6-2018 Isigaba: DJ Drops
Ladies and Gentleman, Amahora amane kuze 2018. Okumisiwe, T-minus amahora amane futhi ubale kuze kube yi-2018 (ekhishwe)
Ladies and Gentleman, Amahora amahlanu kuya ku-2018. Ngama-standby, T-minus amahora amahlanu futhi? Ukubala kuze kube yi-2018?
Siyabonga ngokuphuma nokugubha u-Eva Wonyaka Omusha nathi. Sivaliwe manje ngakho sizokubona ku-Waffle House! (okukhiqiziwe)
Sicela ume, i-DJ inenkinga yobuchwepheshe. Sicela uthole isiphuzo ebhasini, thola inombolo yomuntu kodwa sicela uhlale. (okukhiqiziwe)